Pregnancy and HIV ကိုယ်ဝန်နှင့် HIV - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ HIV ရှိသော အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သင့်ပါသလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါဆရာ။
၂။ HIV ပိုး ရှိနေသူ ယောက်ျားနှင့် ပိုးမရှိသူမိန်းမတို့ အတူနေရာကနေ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင် ကလေးကိုကူးစက်နိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ရ/မရ သိချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း HIV ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစကတည်းက ပိုးရှိနေတာသိရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ ပိုကောင်းတယ်။ ကလေးကို မကူးစေအောင်ဆောင်ရွက်ဘို့ အချိန်ပိုရလို့ကောင်းတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းအတွက်လဲ မကူးအောင် လုပ်ဘို့လိုတယ်။ ပိုးဟာ သွေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်တဲ့အရည် (ယောက်ျား စီမင်၊ မိန်းမ ဗဂျိုင်းနား အရည်၊ နို့ရည်) တွေနဲ့ ပိုးရှိမိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ကလေးကို ကူးနည်းတွေနဲ့ ကူးစက်တယ်။ လိင်လမ်းကနေကူးတာကအများဆုံးဖြစ်တယ်။
အများဆုံးစမ်းသပ်နည်းဟာ HIV antibody test (အင်တီဘော်ဒီ) ရှိ-မရှိ စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ သွေး၊ ဆီး နဲ့ ခံတွင်းက အရည်တွေကို စမ်းတယ်။ ပဌမနည်းနဲ့စမ်းလို့ အပေါင်းပြတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် တခြား (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းနည်းတခု ထပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီနည်းကို Confirmatory HIV test သေချာအောင်လုပ်နည်းလို့ခေါ်တယ်။ အဖြေရအောင် ရက်နည်းနည်းတော့ယူရတယ်။ တချို့ ခံတွင်းအရည်စမ်းနည်းကတော့ နာရီပိုင်းသာကြာတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး ပိုးတွေ့သူလဲ ကျန်းမာနေအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကလေးကိုမကူးအောင် ဆေးသောက်ရမယ်။ ကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နတုံး၊ မွေးနေတုံးနဲ့ နို့တိုက်နေတုံးကာလတွေမျာ ကူးစက်နိုင်တယ်။ မအေက စားစရာကို ဝါးခွံ့ရာကနေလဲ နည်းနည်းပါးပါးကူးနိုင်သေးတယ်။
ART ဆေးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ အနည်းဆုံး ဆေး ၃ မျိုးရောပေးမယ်။ ကလေးမွေးနေတုံးမှာ AZT (IV) ဆေးထိုးပေးမယ်။ ပြီးတော့ ဆေးဆက်သောက်ရမယ်။ မွေးပြီးရင် AZT ဆေးရည် ၆ လသောက်ရမယ်။ တကယ်လို့ မအေက ဆေးသောက်မထားဘဲ မွေးတဲ့ကလေးဆိုရင် AZT အပြင် တခြားဆေးပါ ပေးသင့်တယ်။ ကိုယ်ဝန် မဆောင်ခင်ကတည်းက ဆေးသောက်နေတဲ့မိခင်လောင်းဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ ဆေးပြောင်းရနိုင်တယ်။ တချို့ဆေးတွေက ကလေးအတွက် မသင့်ဘူး။
ဘယ်တော့ ဆေးစပေးမလဲဆိုတာ ပိုးတွေက လူကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်နေပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း CD4 350 cells/mm3 ထက်နည်းကတည်းကနေ ဆေးသောက်နေပြီးဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ကူးစက်ရောဂါဝင်နေကတည်းကဖြစ်မယ်။ အခုတော့ CD4 အရေအတွက်ကိုကြည့်မနေတော့ပဲ ဆေးသောက်စေမယ်။
1. Protease inhibitors (PIs),
2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) နဲ့
3. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာပေးနိုင်တယ်။
4. Entry inhibitors နဲ့
5. Integrase inhibitors ဆေးတွေကို ကိုယ်ဝန်မှာ ပေးသင့်-မသင့် သုတေသနမစုံသေးဘူး။
Sustiva ဆေးတမျိုးတည်းကဖြစ်ဖြစ် Atripla ကနေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ ပဌမ ၃ လ မှာသောက်ရင် ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၃ လနောက်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ Protease inhibitors (PIs) ကဆီးချိုနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်။ Viramune ဆေးက အသဲကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ CD4 250 cells/mm ထက် များသူတွေကိုသာ သုံးလို့အကျိုးများရင် သုံးရတယ်။
တချို့ကိုယ်ဝန်တွေကို မွေးတဲ့အခါ ဗိုက်ခွဲမွေးရင်ကောင်းမယ်။ ၃၈ ပတ်ရှိရင်ခွဲပေးနိုင်ပြီ။ ကိုယ်ဝန်တိုင်းကိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံး ဆေးသောက်မထားသူ နဲ့ မွေးကာနီးမှာ viral load က 1,000 copies/mL ထက် များနေသူကိုသာ ခွဲပေးလို့ အကျိုးများနိုင်တယ်။ ရေမြွာစောပေါက်ထားတာကို ခွဲပေးလဲ မထူးဘူး။
ဘယ်နည်းနဲ့မွေးမွေး မွေးဖွါးခြင်း အန္တရာယ်တော့ရှိတာဘဲ။ ယေဘုယျပြောရရင် ခွဲမွေးတာက ခွဲစိတ်မှု အန္တရာယ်ပါပိုတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ကြာကြာနေရတာမို့ သွေးကြောပိတ်တဲ့အန္တရာယ် ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
ပိုးရှိတဲ့ အမေကနေ ကလေးကိုကူးစက်တာ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာ ၂% ထက်နည်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက မိခင်လောင်းကနေ ဆေးသောက်နေလို့ အထဲက ကလေးကိုပါကာကွယ်ရာကျတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ မွေးနေတုန်းဆေးသောက်ရင် ပိုနည်းတယ်။
ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ၆-၁၂ နာရီအတွင်းမှာ AZT ဆေးပေးရမယ်။ ၆ ပတ်ကြာအထိပေးရတယ်။ တချို့ကလေးတွေကို တခြားဆေးလဲတွဲပေးတယ်။ ကလေးတွေကို Virologic HIV tests နည်းနဲ့စစ်တယ်။ အပေါင်းရော အနုတ်ပါ နှစ်ခါပြမှာသာ မရှိဘူး၊ ရှိတယ်ပြောနိုင်တယ်။ ၁၄-၂၁ ရက်၊ ၁-၂ လ နဲ့ ၄-၆ လတွေမှာ စစ်ရတယ်။ အပေါင်းနှစ်ခါတွေ့ရင် ၄-၆ ပတ်မှာ ဆေးပေးမယ်။ မသေခြာရင် Bactrim ဆေးကိုသတိနဲ့ပေးတယ်။ ပိုးရှိတဲ့ကလေးမှာ Pneumocystis jiroveci pneumonia (PCP) ရောဂါဖြစ်မျာကို အကာကွယ်ပေးတယ်။ ကလေးမွေးပြီးနောက် ပေးနေတဲ့ဆေးကို ပြောင်းသင့်ရင်ပြောင်းပေးမယ်။ CD4 count နဲ့ Viral load တွေကိုကြည့်မယ်။
မေးထားတာကတော့ ဖခင်ကသာ ပိုးရှိတယ်။ မိခင်လောင်းမှာ ပိုးရှိမနေရင်တော့ ကလေးကို မကူးစက်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးမိခင်ရော ကလေးကိုပါ ပုံမှန်ဆေးစစ်နေရမယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလဲ စနစ်တကျလုပ်နေကြရပါလိမ့်မယ်။